တောင်ပေါ်လမ်း…ကားလေးနဲ့…လှမ်းကာလေ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » တောင်ပေါ်လမ်း…ကားလေးနဲ့…လှမ်းကာလေ…..
Posted by Kaung Kin Pyar on Apr 22, 2015 in Arts & Humanities, History | 38 comments
၂၀၁၅ သံဓိဌာန်ထဲမယ် တခြားဟာတွေကိုသာ မဖြည့်ဆည်းချင်နေမယ်..၊ ခရီးတိုလေးတွေ ခဏခဏထွက်မယ်ဆိုတာနဲ့ မစားဖူးသေးတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားမယ်ဆိုတာကိုတော့ ပထမဦးစားပေးအဆင့်အနေနဲ့ စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်…။ မိသားစုနဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေးနေမယ်ဆိုတာလဲ ပါခဲ့ပါရဲ့….ဒီ ၃ချက်လုံး တစ်ပြိုက်နက်ပြည့်နိုင်တာရော၊ ရာသီဥတုလေးကြောင့်ရောနဲ့ သွားဖြစ်ခဲ့တာရယ်…။
၂၀၁၆ သံဓိဌာန်ထဲမတော့….တစ်ခု ထပ်ဖြည့်တော့မယ်….
ဆိုတော့…သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မယ်..တောင်ကြီးခရီးစဉ်သွားဖြစ်ပါတယ်…(ဖဘမှာ ဖလန်းလွန်းလို့ တစ်ရွာလုံးနီးပါးလဲ သိနေပါပြီ…။ ဒါက သူဂျီးဆီက ပိုက်ပိုက်ညာယူတာ…)
တောင်ကြီးသွားမယ်ဆိုတော့ ရင်ခုန်ပါတယ်…အခြေသတင်းကြီးတဲ့ အမြန်လမ်းရယ်…အကွေ့အပတ်များတဲ့…. တောင်ကြီးလမ်းရယ်ပေါ့…
တောင်ကြီးလမ်းသွားရမယ်ဆိုတော့… အရင့်အရင် စိတ္တဇက ထ ကြွလာပါရော…အဲ့တုန်းကဆိုများ…ဟံသာဝတီအ၀ိုင်းကို ကားပတ်ရင်တောင် ဘုရားတရား တ ခဲ့ရတာ…
ခု တောင်ကြီးလမ်းကို စတက်တော့လဲ ထင်တဲ့အတိုင်း… အတိတ်ကအရိပ်တွေက တရေးရေးပေါ်တယ်…
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်ကျော်တုန်းက အလုပ်က အပျိုကြီးတစ်သိုက်ရယ် ရုံးကစာရင်းကိုင် အန်ကယ်လ်ထိန်တို့ မိသားစုရယ်နဲ့အတူ အလောင်းတော်ကသပ သွားဖူးကြတယ်…။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့…ချောင်းသာတို့လို ငပလီတို့လိုကို ရောက်မှာပဲ….။ အန်ကယ်လ်က သွားနိုင်တုန်းလေး..အလောင်းတော်ကသပ သွားဖူးပါရစေ ပြောလေတော့ အန်ကယ်လ့်ဆန္ဒကို လိုက်လျောရင်း သွားဖို့ စီစဉ်ကြတာပဲ….
Timer ချိန်ပြီးရိုက်ခဲ့သော လူစုံ
New Year က ၁၁၅ မိုင်မယ်….။ ရာသီဥတုကလဲ အေးအေးနဲ့ပေါ့….။ မုံရွာကနေ အလောင်းတော်ကသပတက်မယ်လုပ်တော့ မနက် ၁နာရီက ထ သွားရတာ…။ ၃နာရီခွဲလောက်နေတော့…တောင်ခြေမှာ မနက်စာ စားကြတယ်….
မုံရွာက စ ထွက်လာကတည်းက…အန်ကယ့်မြေးလေး…ဘေဘေးက ကျမပေါင်ပေါ်ထိုင်တယ်….။ ခု မနက်စာ စားပြီးတော့လဲ သူက ကျမနဲ့အတူ…ထိုင်တယ်..။
ဘေဘေးလေးကို ခေါင်းစွပ်လေး ပြန်စွပ်ပေး…စောင်လေးပါ အပေါ်က ထပ်ခြုံထားရင်း ကျမသူ့ကို ဖက်ထားပြီး ငိုက်ကောင်းတုန်း ရှိသေးတယ်…..။
မရီအေးအော်သံအဆုံးမှာပဲ….ကျမ လန့်နိုးလာတော့…ညာဘက်ဘေးက ချယ်ရီက ဟိုဘက်ကို လျောကျနေပြီ…..
ချယ်ရီ့ကို လှမ်းဆွဲတဲ့အချိန်….ဘေဘေးကလဲ လျှောကျတော့မယ်…..ကျမ ဘယ်ဘက်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ ဘေဘေးကို မထိန်းနိုင်တော့ဘူး….
မထူးဇာတ်ခင်းပြီး…ကျမ ကလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ တင်းတင်းဖက်ရင်း….အောက် အကျကို ကျောနဲ့ခံလိုက်တယ်…..
ခြေထောက်က မိုးပေါ်ထောင်လို့…လူက ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတယ်..
ဇောက်ထိုးကျတဲ့အရှိန်ရယ်….အပေါ်က…..ဘေဘေးဝိတ်ရယ် ပေါင်းပြီး ကျမလည်ပင်းရိုးအောက်ဘက်က အတော်ကို နာသွားတယ်…ခေါင်းလဲ နည်းနည်း…. ပေါက်သွားတယ်….
ကားပေါ်မယ်… Gas အနံ့တွေလဲ လှိုင်နေပြီ…..။
အတူပါလာတဲ့ ဂိုက်က ကျမနား ကလေးရှိမှန်းသိလို့ ကျမဘေးက ပြတင်းပေါက်မှန်ကို ခွဲပြီး မြန်မြန်ထွက်လာဖို့ လှမ်းအော်နေတယ်….(သူက ကားစ ယိုင်ကတည်းက ပြတင်းပေါက်က ခုန်ထွက်ခဲ့သတဲ့….) ကျမက မထနိုင်…။
ဒါနဲ့ပဲ ကားရှေ့မှန်ကို ခွဲလိုက်တော့မှ….ကျမတို့ အဲ့ဒိအပေါက်က ထွက်ရတယ်……
ကျမ ကြောင်တောင်တောင်နိုင်တာ တစ်ခု ရှိသေးတယ်….။ တခြားလူတွေက အပြင်ရောက်နေပြီ….။ ကျမနဲ့ မနီလာက ကားထဲမယ်..ဖိနပ်လိုက်ရှာနေတာရယ်….(ဟုတ်တယ်လေ…ခရီးက ဆက်ရဦးမှာ…သံစူး မှန်စူးရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ….)(ကားထ ပေါက်ကွဲရင် လျှောသွားတော့မယ်….သံစူးမှန်စူးကို တွေးနေတယ်…..ကြောင်တာ ၀န်ခံပါရဲ့..)။
အပြင်က အဖွဲ့တွေ ၀ိုင်းအော်ကြမှ…ကျမတို့နှစ်ယောက် ဖိနပ်လေးတွေ ကိုယ်စီကိုင်ရင်း ကုပ်ကုပ်လေး ထွက်ရတယ်…။ ခေါင်းဆိုတာ….ဟိုဘက်ဒီဘက်တောင် လှည့်လို့မရ….
ကံကောင်းချင်တော့…အနီးအနားမှာက တောင်ခြေဘုန်းကြီးကျောင်း…..ရှိနေတာရယ်…။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ရောက်မှ အနာကို ဆေးလိမ်းဆေးထည့်နဲ့ အချင်းချင်း သတင်းမေးရတာ…..
ကားက ဂီယာကြီးကို ဘယ်လိုမှ ထိုးမရတော့တဲ့….ဒါနဲ့ပဲ အောက်ကိုလိမ့်လာတော့ ယာဉ်မောင်းက တောင်ဘေးကမူကို ပြေးကပ်လိုက်တာ…သူ့ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်..၊ ညာဘက်က ချောက်ထဲသာ ကျရင်….အောက်မှာ ၀ါးချွန်တွေနဲ့….တာ့တာပြတဲ့ပွဲတောင်….ရုပ်ထွက်လှမှာ မဟုတ်ဘူးပဲ….. (ဆိုင်လား မဆိုင်လားတော့ မသိဘူး….အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက….နတ်ရှင်နောင်ကို နင့်နင့်နဲနဲ သတိရမိ…..)
ဘုန်းကြီးက တောင်အောက်ဆင်းဖို့ ကားရှိသတဲ့….။ မရှိဘဲ နေပါ့မလားရယ်…ကားပေါ်က အတူပါလာတဲ့လူကြီး…တစ်ခေါင်းလုံး.. သွေးတွေချည်းပဲ….။ တခြား နှစ်ယောက် သုံးယောက်လောက်လဲ…ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ကြတယ်….။ အသေအပျောက်တော့ မရှိ…..။ ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲကလူတွေကတော့ ထိပ်ပေါက်ခေါင်းကွဲ ဖူးယောင်လောက်သာ….။ ယာဉ်မောင်းကိုလဲ စခန်းကျမှ ရှင်းရဦးမယ်ဆိုတော့…ကျမတို့အဖွဲ့ကိုလဲ တစ်ခါတည်း လိုက်သွားပေါ့….
ကျမတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကလဲ…. ပြန်မလိုက်ဖူး….တောင်ပေါ်ဆက်တက်မယ်…..။ ဘုန်းဘုန်းက အမှားအယွင်းတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တာရှိရင်…ဆက်တက်တဲ့အခါ ဒုက္ခရောက်မယ်နော်…လို့ ပြောတယ်….
တပည့်တော်တို့ အမှားအယွင်းလုပ်ခဲ့တာ … မရှိပါဘူး ဘုရား….တောင်ပေါ်ဆက်တက်ပါရစေ ဆိုတော့ ကားတစ်စီး စီစဉ်ပေးတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ကျမတို့အဖွဲ့ ဘုရားစာရွတ်ရင်း ညည်းငြူရင်း ရီမောရင်းနဲ့ပဲ အလောင်းတော်ကသပ ရောက်ခဲ့ကြတယ်….။
ထိပ်ပေါက်ခေါင်းကွဲ ဖူးယောင်ပြတ်ရှ…လူပုံတွေကလဲ စုတ်ပြတ်လို့ပေါ့….
ဒီလိုနဲ့ပဲ….အလောင်းတော်ကသပကို ရောက်အောင်သွားဖူးခဲ့ကြတယ်….။ တကိုယ်လုံး နာနေလို့ ဆင်တောင် မစီးနိုင်တော့…။
တည်းတဲ့ နေရာဆီရောက်တော့ အားလုံးပင်ပန်းနေပြီ……။ ကားအုံနာကဆို အချိန်မှီပြန်မရောက်လို့ ဆေးရုံတို့ ရဲစခန်းတို့တောင် စုံစမ်းနေပြီ တဲ့…။
ကျမ..လက်ပြင်နှစ်ခုကြားနေရာက နာလိုက်တာဆိုတာ….ကျောချအိပ်တာတောင် အရမ်းနာလို့ အိပ်လို့မပျော်နိုင်တဲ့ထိ…
ဒါပေမယ့်…လူငယ်စိတ်မို့လားတော့ မသိ…။ အပြန်လမ်းမှာ တွေ့သမျှဘုရားဖူးလိုက်တာပဲ…မင်းကွန်းပုထိုးတော် နေရာကိုဆိုလဲ ရောက်အောင်တော့ တက်လိုက်ကြတာပဲ…။
ခေါင်းလှည့်မရလို့ တောင့်နေတာတောင် ညက်နှာကြောမသေဘဲ….မင်းကွန်းပုထိုးပေါ်မယ်…
ရောဂါတွေက ရန်ကုန်ရောက်မှ ပေါ်တာ….။
စံပြအရိုးအကြောမယ်…တစ်လလောက် ကုယူရတယ်…။ ဒါတောင် ညဘက်တွေအိပ်တိုင်း ၂နာရီလောက်ဆို အရမ်းနာပြီး မအိပ်နိုင်လို့ ကျောမယ် ခေါင်းအုံးခုပြီး ထထိုင်ရတုန်း….
လူတွေက ပျော်ရွှင်စရာအဖြစ်တွေထက် နာကျင်စရာအဖြစ်တွေကို ပိုမှတ်မိနေတတ်တယ်လို့ ကြားဖူးတုန်းက ကျမ လက်ခံလိုက်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ဖူးတယ်…။
သို့သော်…တောင်ကြီးသွားတဲ့ လမ်းမယ်….အဲ့ဒီစကားကို ပြန်တွေးမိနေခဲ့တယ်…
ဒီ အက်ဆီးဒင့်ကိစ္စမှာလဲ….ကျမ မမှတ်မိချင်တဲ့ တချို့ကိစ္စတွေက…ကိုယ်တမင်…သတိတရရှိနေတာမဟုတ်ပေမယ့်….မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ အားထုတ်ပေမယ့်….ပြန်သတိရချင်စရာ မကောင်းနေပေမယ့်လဲ…. စိတ်အာရုံတစ်နေရာမှာ…ကျန်နေတတ်ခဲ့တာ တချို့ရှိတယ်….
(တောင်ပေါ်လမ်း…ပြောပြီး….အလောင်းတော်ကသပက ပုံတွေဖြစ်နေတယ်….။ တောင်ကြီးအသွားလမ်းမယ်…..မှတ်မှတ်ရရ တွေးမိခဲ့တဲ့ အတွေးပါ….။ ဖောင်တော်ဦးဘုရားတို့…ကလောမြို့တို့ကတော့ စုတ်ချာလှတဲ့ ကျမရဲ့စနက်ရှော့တွေ မပြတော့ဘာဘူး……)
နတ်ရှင်နောင်ရရင် လည်း မစားသာ။
ဒါ အတိတ်လမ်းနဲ့ ပျိုးတာပေါ့။
တောင်ကြီးခရီးစဉ်က…ဘာမှ မှတ်မှတ်ရရ ရှိတာ မရှိ….
ရွာထဲမယ် …ခရီးထွက်ကြတာတွေ များလို့….တူများ မဦးခင်…အရင်ကြိုဦးလိုက်ထှာ..
ဦးကျောက်စ်တို့ Final Year ကွင်းဆင်းတော့ အောင်ပန်းဟိုဘက် ရွာငံလမ်း…
မြင်းကျတိုးမှာ ညကြီးသန်းခေါင် ကားမှောက်တာ အတော်အီတွန့်ပွမ်သွားတယ်…
ကားက ဂီယာပြုတ်ကျတာ တဘက်ကချောက်မို့ တောင်ကမ္ဘားနဲ့ ပွတ်လိုက်တာလေ…
အမှတ်တရ ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ အသိုက်ပျက်သွားတယ်…
လူတွေက ပျော်ရင် ဒဏ်ရာတွေမေ့ပျောက်တယ်တဲ့….
တော်သေးတာပေါ့ ခနမို့ လို… ကြာရင် ဒဏ်က မသေးဖူး….
စကားပြောအရေးအသားလေးနဲ့ ကောင်းတယ်ဗျို့ ….
တောင်ကြီး အကြောင်းဆက်ရေးပါဗျို့ …
ကျွန်တော်က တော့ တောင်ကြီး အကြောင်း ပြောရင် ကားဘီ ကြီး လွတ်နေတာပဲ မြင်စိထဲမြင်တယ်…
ုဖြစ်တုန်းက လည်ပင်းမှာ ဒေါက်ခုခိုင်းတာရယ်…။ လည်ပင်းရိုး ၅နဲ့ ၆ကြား ထိသွားဆိုလား….။ အိုက်ဒေါက်ကြီးနဲ့ မနေချင်တာ…ဆရာဝန်မ ဆူမှာစိုးလို့…သွားကိုမပြတော့…..
လေဆာနဲ့နှိပ်တာလား….စစ်စစ် စစ်စစ်နဲ့…အိုက်ဒါလေးတော့ လွမ်းမိသား….
”လူဆိုတာ လင်းဝေစိမ်းမြတဲ့ ပန်းညများစွာထက်
သရဲခြောက်ရာ ညတစ်ညကို ပို သတိရတတ်ကြတယ်” တဲ့
အဲ့ဒီစာသားလေးကို ဘယ်စာရေးဆရာ ရေးခဲ့သလဲ ? သိလား ?
ငါ… ပျိုးထားတဲ့ မြနှင်းဆီဟာ
မီးခိုးလုံးများ ဖြစ်သွားရော့မလား… လို့
နှုတ်ခမ်းကိုက်ပြီး.. ငါ စဉ်းစားဖူးတယ်…။
အရောဝင်လို့ မကောင်းတဲ့ ခွေးကလေးပါပဲ….။
ခုမှ… စံပယ်ရွက်ပေါ် မူးလဲ
ငါ.. ဘယ်လိုမှ မေ့မရတဲ့
ခု… ရထားတို့ ဥသြဆွဲလိုက်ကြပြီ..
…အားလုံး ပြီးဆုံးသွားပါပြီ…´ တဲ့။
ခါးကုန်းနေတဲ့ ငါတို့ရဲ့ မြရာပင်အိုကြီးဟာ
ငါက.. ဆပ်ပြာဖူဖောင်းကို ခိုစီးပြီး
`သစ္စာ´ကို ပဲ့တင်သံနဲ့ပဲ ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့သူ…။
ငါ့ကိုသတ်… ငါ့ရင်ဘတ်ကို ထိုးခွဲဖောက်လှန်ကြည့်
`…………….´ကို ချစ်တယ်… လို့
ငါ့ဆီမှာ… မြေမှုန်တွေ စွန်းထင်းလျက်ပါပဲလေ…။
သရဲခြောက်ရာ ညတစ်ညကို… ပိုသတိရတတ်တယ်´ …။
အကြွင်းမဲ့ ဖော်ပြသွားခြင်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ငါ… သတ္တိကောင်းကင်မှာ… နီလွင်ထစ်ချုန်း
ငါကလည်း `အဓိပတိဖွား´ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာကိုး …။
ဘယ်သူ့မှ မပြောချင်တဲ့စကားတွေ ပွေ့ပိုက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို.. `လူမိုက်´လို့ ပြန်ခေါ်ခဲ့ရတယ်…။
ရယ်ကာမောကာ ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ အကျင့်လေး
ဗီးနပ်စ်ရဲ့ နက္ခတ်တို့ တလက်လက်ပြာဝေမှုန်သင်း
မြင်းကကြိုးတို့ကို ပြင်လို့ `သ´လို့နေခဲ့ပေါ့…။
ငါ… ဘာကိုမှ မကြောက်ခဲ့ဘူး…။
ဗလာစာအုပ်ပေါ်က သုညက မြတ်တယ်´တဲ့
လကွယ်ညရောက်တိုင်း… ငါ ဂစ်တာတီးနေမယ်…။
ဒုတိယအရာကို ငါ… ငြင်းတယ်…။
ငါ.. မရောက်.. ရောက်အောင်သွားမယ်…။
ငါချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ ကမ္ဘာရဲ့ ထိပ်ထားကို
အရာရာကို လက်ဖြန့်မိုး စောင့်ရှောက်ချင်တဲ့ လူငယ်
ခု… ခြွင်းချက်နဲ့ လက်နက်ချလိုက်ပါတယ်…။
မင်း… ငါ့ကို မေ့သွားမှာပါ…။ ခုတော့……….. သွားတော့နော်….။
ငါ… ချစ်မြတ်ရတဲ့ နေရောင်ခြည်တွေနဲ့ မိန်းမပျိုကို
ဝမ်းမနည်းသလို ငါတို့ နှုတ်ဆက်
မီးတောက် ရစ်သမ်. . .
အဲ့ကဗျာရှည်ကြီးကို စကားလုံးတိုင်း အလွတ်ရနေတဲ့အထိ
နာလဲ ကြားဖူးတယ်….။ တာရာမင်းဝေတော့ မဟုတ်ဘူး..ထင့်…
ဤသို့သော် အမှတ်တရခရီးစဉ်မျိူး မရှိကြပါစေနဲ့လို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျ။
ရုံးမှာလဲ…မသိတဲ့လူတွေ စရင်းနောက်ရင်း ဖြောင်းခနဲ ကျွေးသမျှ…ခံစားရနဲ့….
ဒါမျိုးတွေမေ့ဘို့ ဟိုတစ်ခါ သဂျီးပြောဘူးတဲ့ မေ့လိုရာမေ့ ဆေး မှာသောက်ရမယ်ထင့်…
တောင်ကြီးလမ်းကို တက်တဲ့အချိန်…ဖြစ်ချင်တော့…ထိုင်ခုံက ညာဘက်ပြတင်းပေါက်နားမယ်….
သူဂျီးပြောတဲ့ မေ့လိုရာ မေ့ဆေးရှိရင် သောက်ချင်ထှာ….
ကင်းကောင်လေးအချောဆုံး… :)) ဒဏ်ဖြစ်သွားတာနော်… သေချာပြန်စစ်သင့်တယ်…
မိုးတွင်းလို အရမ်းအေးရင်…ဆောင်းတွင်းလိုအချိန်တွေဆို အနာဟောင်းတွေက ပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်…။ ဖြစ်တုန်းက ခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်း ပြန်လုပ်ပေးရတာတို့…ဇက်အောက်မှာ…စောင်လိုဟာမျိုး လိပ်ပြီး ခု အိပ်ပေးရတာတို့နဲ့..
ခုလဲ ခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်း ပြန်ပြန်လုပ်ပေးနေရတယ်…..
မခွစ်ပြောသလို…ဓာတ်မှန် ပြန်ရိုက်ပြီး ပြန်တော့ စစ်ဦးမှပါ…
အမှတ်တရနော် ကျတော်ကတော့ ထားဝယ်အသွား မော်လမြိုင်ဘက်ကနေ ဟိုဘက်ကိုအကူး အဲ့တုန်းက တံတားမဆောက်ရသေးဘူး။ ရေမနစ်ရုံတမယ်ဖြစ်ခဲ့တာ မှတ်မိသေးတယ်။
အဆင်းလမ်းမှာ ကားနှစ်စီး ထိပ်တိုက်တိုးတာ ကံကောင်းလို့ ချောက်ထဲမရောက်တယ် (မှတ်မှတ်ရရ နတ်ထိပ်အလွန်လားမသိ)
နှုတ်ရော လက်ရော အတော်စောင့်စည်းခဲ့ရတဲ့ ခရီးစဉ်မို့ ခုထိ မှတ်မိနေတုန်း………………
​ကောင်းကင်​ပြာရယ်​ မထိတ်​သာ မလန့်​သာ
ဟီးးးး အိုက်လိုပါဆို ဆရာနေရဲ့
ဘွမှာတော့ မှတ်မှတ်ရ ရ
.ကျုပ်လည်း မေမြို့က အဆင်းလမ်းမှာအက်ဆီးဒင့် ဖြစ်ဖူးတယ်
.လူတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေ လုံးထွေးပြီး တော်တော်ဒဏ်ရာရကြတယ်…ကျုပ်က ခြေသလုံးညပ်ပြီး .အတွင်းကျေသွားလို့ တစ်လလောက်ကုလိုက်ရတယ်…အမှန်ကိုမမေ့နိုင်ဘူး
တော်ပါသေးရဲ့ ဦးမိုက်ရယ် ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်တာ။ ကောင်းကင်ပြာတို့ကားလဲ ပစ္စည်းတွေသိပ်မပါလို့သာ တော်တာ။ တောင်ပေါ်တက်တော့ mini bus နဲ့ပြောင်းပြီးတက်ကြတော့လေ…
ဒရိုင်ဘာတွေ တောင်နံရံကို ကပ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။
အမယ်လေး လန့်စရာပဲ ကောင်းကင်ပြာရယ်။ စိတ်တော့ အတော်ဝင်စားသား။ အဲဒီဘက်ကို မရောက်ဖူးသေးဘူး။ သွားချင်လိုက်တာ အရမ်းပဲ ခုတော့ မသွားနိုင်သေးပါဘူး။
ရာသီဥတုလေးအေးလို့ နေလို့ကောင်းတယ် မမနောရဲ့။ သဘာဝအလှတွေလဲ အရမ်းလှပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းတွေဆိုလဲ လှလိုက်တာ လှလိုက်တာနဲ့ အော်နေရရော။
အချိန်ရ ရင်တော့ ခရီးတွေ ထပ်ထွက်ချင်သေးတယ်။
ကင်းကောင်လေး ပျောက်နေတာ လမ်းသလား နေတာကိုး။
ရွာ့ လုံမ ပီသ တဲ့ ပို့စ် ဟေ့။
. တောင်ကြီး ဆို အလောင်းတော်ကသပ ရောက်ရော။
ပုပ္ပါးဘက်သွားရင်လဲ အမဲ မဝတ်ရတဲ့။
အဝတ် ၁၀ ထည်မယ် ၉ထည် က အမဲ ဖြစ်နေတာကို။
အရေးအဖွဲ့ က ကောင်းတော့ ဖတ်ရင်း ကိုယ်တောင် ဇက်နာသွားသလို။
ဖိနပ်သရဲမလေး မှန်းသိအောင် ဖိနပ် ကို ရအောင် ယူထွက်တယ်ပေါ့။
ဒီလောက်နာနေကြတဲ့ ကြားက ခရီး ကို ရအောင် ဆက်နိုင်ကြတာ ချီးကျူးတယ်။
အောက်ဆုံးမှာ ဦးထုပ်ပြောင်းပြန်ဆောင်းထားတာ ကင်းကောင်လေးလား။
ဘေဘေးလေးနဲ့ ပုံမှာ နှစ်ယောက်လုံး အပြစ်ကင်းကင်း မျက်နှာလေးတွေ နဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်ကြတာ။
. တောင်ကြီး လမ်း ကိုလဲ ဖွဲ့ပါဦးကွယ်။
အရီး မှာလဲ တောင်ကြီး ဇာတ်လမ်း ရှိလို့ ပြန်လွမ်းလို့ရအောင်ပါ။
အဟီးးးး ဟုတ်တယ်အရီးရေ……တောင်ကြီးသွားရင်း အလောင်းတော်ကဿ ပရောက်သွားတာရယ်။
တောင်ကြီးမြို့လေးက အရမ်း နေလို့ကောင်းပါတယ်။ သွားတုန်းက နွေခေါင်ခေါင် အနွေးထည်ဝတ်နေရတာရော မိုးရွာတာရော သဘောတွေကျလို့။
လုလုနဲ့ မထရစ်တာကို တွေ့ခဲ့ရတာလဲ အမှတ်တရပါပဲ။
ကောင်းကင်ပြာအတွက် အဆင်မပြေတာ ထုံးရေတွေရယ်။
အရည်ပြားပါးလို့ သောက်ရေနဲ့ပဲ မျက်နှာသစ်ရတယ်။
အောက်ဆုံးပုံမယ် ဦးထုပ်အနီနဲ့က ကောင်းကင်ပြာပါ အရီးရယ်
မုံရွာဆေးခန်းမှာ လက်ပူတိုက်ပြပြီး လိမ်းဆေးတွေရော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကောင်းမှုနဲ့ အဆင်ပြေနေတာ
ရန်ကုန်ပြန်တော့ အထုတ်အလေးကြီးတွေ သယ်တာရော၊ အမေ့အတွက် မ လာတဲ့ သနပ်ခါးတုံးတွေဝိတ်နဲ့ လက်ပူတိုက်ကုထားတဲ့အရှိန်က ကုန်လေတော့မှ ဆေးပြန်ကုရတာ။
lamin ngel says:
စာကောင်းကောင်းမရေးတတ်ပေမဲ့ အရေးအသားလေးကောင်းလို့ ဖတ်သွားပါတယ်။တာရာ့ကဗျာလေးတွေကိုပါအစစ်ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။ ကဗျာဆိုအရမ်းချစ်တယ်။ငယ်ငယ်ထဲကချစ်ခဲ့သဘောကျခဲ့ရတဲ့တာရာ့ကဗျာအတွေအတွက်ထပ်ဆင့်ကျေးဇူးပါ။ကောင်းကင်ပြာ့စာတွေလဲအမြဲအားပေးနေပါ့မယ်
စာဝင်ဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသွားတဲ့ လမင်းငယ် ကိုလဲ ကျေးဇူးပါ။
နောက်လဲ ရွာထဲ ဝင်ပြီး မကြာမကြာ အသံပြုဖို့ :-))))))))))
ရွာထဲလဲ မကြာမကြာ လာခဲ့ပါဦးလို့……
အေးလေ.. ဖိနပ်ကအရေးကြီးတာပေါ့ လူကမသေ၀ူးပဲဟာ..ဖိနပ်မပါ ဘီလိုလမ်းဆက်လျောက်မလဲ.. ကင်းကြောင်လေးက အဓိကနဲ့ သာမညကိုခွဲသိတာပေါ့….
ချွိရှာပေးတဲ့ တာရာမင်းဝေကဗျာလေးလဲ.. ကြိုက်..
ကားသာမှောက်တာ…လမ်းသလားဖို့က စိတ်လျှော့သေးတာ မှုတ်ဖူးးးး
ရွာကနေ ကြိုဆိုပါတယ် …
ကားမှောက်တုံးက ကင်းကောင်လေး ဇောက်ထိုးဂျီးဆိုတော့ အဲဒုံးဂ စကပ်ဝတ်ထားလျင် ပေါင်ကြီးပေါ်နေမှာပဲနော်… တွေးကြည့်ရင်း အယသာရှိလိုက်ထှာ….။
အလောင်းတော် ကဿပသွားခဲ့တုန်းက ပုံတွေကျိ…
အဲ့ခရီးတလျှောက်လုံး တခါမှ စကပ်မဝတ်ခဲ့ဘူးးးး